Toy ny paompy vaky, mifantsitsitra eny anelakelaky ny rindrim-bato amin’ny tamboho ny rano miloko fotsy mamoaka fofona maimbo arahina fotaka mena ka mando lava sy feno lomotra vokatr’izany ny rindrina, hoy Atoa Rabesoa mivady raha nitantara ny fahoriany tamin’ny mpanao gazety. Lasa mihorohoro andro aman’alina izy ireo ndrao hihotsaka fanindroany any amin’ny tanànany indray io rindrina mampisaraka azy ireo sy ireto mpifanila vodirindrina aminy ireto. Efa efa-taona izay no niainan’izy ireo izany satria efa nianjera mihitsy ilay tamboho ary efa niakatra fitsarana in-droa ny raharaha. Nakana teknisianina teny amin’ny tribonaly ny raharaha ary efa nivoaka ny didy tamin’ny taona 2018 fa tokony hanamboatra ny simba ny tompon’ity tranobe mifanila vodirindrina ity. Ankoatra izay, didin’ny lalàna hanamboatra ny fantsona fanarian-drano ao aminy tsy hivoaka aty aminay izy ireo, hoy hatrany Atoa Rabesoa.
Vita amin’ny ampahany ny fanamboarana
Tafatsangana ny tamboho nianjera, nandalotra ny elakelaky ny rarivato izy ireo saingy mbola miverina mibosesika amin’ny rindrina hatrany ny rano hatramin’izao. Araka izany, tsy mbola vita ny fanamboarana ny fantsona manary ny rano maloto nodidin’ny lalàna fa tokony hamboarina. Manoloana io trangan-javatra io mihitsy no hanaovan’ireto olona lasibatra ireto antso avo amin’ny tompon’andraikitra fa toa mihainohaino fotsiny tsy mitady vahaolana amin’izy tokony hanariany maloto avy ao aminy ny tompon’ilay tranobe mifanila vodirindrina taminy. Efa nampatsiahy azy ireo hatrany anefa izy mivady ireto, araka ny nambarany. Vao ny alatsianainy 17 febroary teo no nandefa taratasy tany amin’ilay « architecte » tompon’andraikitra amin’izany saingy tsy misy valiny. Ny zava-misy mantsy dia orana kely mirotsaka dia efa niteraka rano be mibosesika marobe teny anelanelan’ny rindrina indray, kanefa ao anaty vanim-potoanan’ny fahavaratra isika ka manahy mafy amin’ny loza mety hitranga izy ireo sy ny mpanofa trano ao aminy, ankoatra ny loto sy fofona mivoaka. Raha nanontaniana mikasika io raharaha io moa ny tompon’andraikitra tao amin’ilay trano lehibe mifanolo-bodirindrina amin’izy ireo, dia nanambara fa ny mpisolovava ny tompon-trano no afaka mitondra fanazavana mikasika izany.